ကရင်ပြည်နယ် သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမှ စာထုတ်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကရင်ပြည်နယ် သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမှ စာထုတ်ပြန်
Posted by ဘဲဥ on Oct 23, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ကောင်းတယ်ဗျာအစထဲက အဲလိုဖြစ်သင့်တာ အခုမှအဲလိုသတ်မှတ်တာ
နောက်တောင်ကျနေသလို ခံစားရတယ် ………….
‘ဒါရခိုင် ( Deleted by Mod –6) တစ်စု့တွေရဲ့ အကြံအစဉ်လုပ်တာပါ။ ဘာသာရေးဆူပူမှုဖြစ်အောင်သောင်းကျန်းနေ
တာ။ နဂိုက ကရင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်ဆိုအသေသတ်နေတာပါ။ရခိုင်ဆိုအသေမုန်းပါတယ်၊ဘုန်းကြီးဝတ်
ပြီး လာပြီးကရင်မှာနေလို့ရတာ၊ ကရင်မှလာပြီးအစ္စလာမ်ကိုစော်ကားနေကြတယ်၊ ရခိုင်ဆိုတာ ( Deleted by Mod –6) ဆိုပြီး ဗမာပြည်သားတွေ၊ကရင်တွေကို နှိမ်တဲ့( Deleted by Mod –6)ပါ။
စာဆိုတောင်ရှိပါတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် ရခိုင်နဲ့မြွေပွေးတွေရင် ရခိုင်ကို ( Deleted by Mod –6) တဲ့။
အဲဒီလောက် ကြောက်စရာကောင်းအောင်သွေးထိုးတဲံ၊သွေးဆိုးတဲ့အမျိုးတွေပါ။ အစ္စလာမ်ကိုသွေးခွဲပြီး
( Deleted by Mod –6) ဗမာတွေကိုသွေးခွဲပါလိမ့်မယ်၊ရခိူုင်ကလွဲပြီးကျန်တာတွေကို( Deleted by Mod –6)လို့ထင်တဲ့
အကောင်တွေပါ။သတိထားပြီးမောင်းထုတ်ကြပါ။မြန်မာပြည်ြ ကီးကို မီးထိုးသွေးခွဲပြီးရခိုင်နိုင်ငံထူထောင်
ချင်တဲ့( Deleted by Mod –6)၊ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတတ်တဲ့ ( Deleted by Mod –6) ကိုတိုက်ထုတ်ကြပါ။
သတ်မှတ်တာ အရမ်းကိုနောက်ကျတယ်….ကျနော်မြန်မာတွေဟာ..ဟိုးယခင် ဦးနာအောက် လမ်းပြခဲ့တာကို သင်ကြားရတဲ့စာကို သင်ရတဲံ့ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ထားခဲ့ကြတယ်..ဘယ်လောက်ပိုပေးပေးကွာ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားဆို မေ၇ာင်းဘူးဆိုတဲ့သူ မရှိ့ခဲ့ကြဘူး..ခု့ သတ်မှတ်တာ ကို ဟိုး…မွန်ပြည်နယ် ကော့နှပ်ရွာ ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းကြီး ဦးနာအောက် ရဲ့ ဇါတိ့ချက်ကြွေ ရွာလေးမှာဆို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက မိ့မိ့ရဲ့ ခြံမြေ ဥယျာဉ် လယ်ယာတို့ကို ဘာသာခြား တွေကို ဘယ်လောက်ပိုပေးပေး မရောင်းခဲ့ကြဘူး..အဲ့ဒါ ဘယ်သူမှ့ ဥပဒေထုတ် တားမြစ်နေစရာ မလိုဘူး သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲက ဆွဲနေတဲ့ အသိ့နဲ့တင် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့ကြတာပါ..ခု့..မှ့ သတ်မှတ်တာတွေ ဘာညာ လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့
ရှက်စရာပေါ့……ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်း ပိုပေးေ၇ာင်းမှာပဲ…ဆိုတော့ကား..ထုတ်သင့်ပါ၏
ကြားရတာ ၊ ဖတ်ရတာ
ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလို့ ကျေးကျေးပါ
ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် အမိန့်တွေအာဏာတွေနဲ့ ကာကွယ်လို့မရပါဘူး။
နှလုံးသားတွေမှာ ဘုရားတည်အောင် ကလေးငယ်တွေကစလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံတွေ သင်ကြားပေးရမှာပါ။
ဈေးကောင်းရရင် လူတိုင်းရောင်းကြမယ်၊ဈေးချိုရင် လူတိုင်းဝယ်ကြမယ်။
သိချင်တာ တစ်ခုပါဘဲ ။
တရားဝင်တာမ၀င်တာထက်.. တချိန်ချိန်မှာ..အဲဒီအမိန့်ကိုင်ပြီး.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို(သာ).. အုပ်စုနဲ့.. အတင်းအကြပ်အနိုင်ကျင့်တာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်..။
တရားဝင်မယ်လို့တော့ မထင်မိပါ ၊ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့လုပ်တဲ့ ဥပဒေ သဘောမျီုး
သက်ရောက်တာကြောင့် အဆင်ပြေသလို အပြစ်ဒဏ်ပေးမယ် လို့ ကြားမိပါတယ် ၊
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်တယ် ။
အမြင်ကတော့… အဲလိုပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်လေ.. ဒါက မြန်မာလူမျိုး က ခုမှ အစပျိုးဖို့ကြံတယ်။ အဲဒီမူဆင်တွေက ဒီလိုစည်းကမ်းတွေကို ကျင့်သုံးနေတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီမသိ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းကမ်းထုတ်တယ်ဆိုရင် လိုက်နာဖို့တော့လိုတယ်..။ ကုလားလူမျိုးပွားများပျံ့နှံ့လာတာတွေ ကြည့်ရင် မြန်မာတွေ စည်းကမ်း ဘယ်လောက်ဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိသာတယ်။ ဒီလိုသာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း မကြာသော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း မှာ ကုလားစာတစ်ခုတိုးလာတာ တွေ့ရတော့မယ်။ ( တရုတ်ကိုတော့ ..မပြောသေးဘူး၊ မနေ့က ဘီယာတိုက်ထားလို့.. :D)
ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ပုဂ္ဂိုဟ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဦးဆောင်ပြီး စည်းကမ်းချက်(၄)ချက်ကိုကြေငြာတယ်…
အရင်ဆုံးအဲဒီအဖွဲ့မှာ အဲဒီလိုစည်းကမ်းထုတ်ရလောက်အောင် တရားဝင်အခွင့်အာဏာရှိပါသလား…
မလိုက်နာရင် အပြစ်ပေးမည်ဟုပြောရလောက်အောင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တပါးအနေနဲ့ စည်းကမ်းတွေထုတ် မလိုက်နာရင် အပြစ်ပေးမယ်လို့ မီဒီယာကတစ်ဆင့်ကြေငြာတာဟာ တော်တော်ရုပ်ပျက်တဲ့ကိစ္စပါ…
တကယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာခွင့်မရှိသော၊ အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က ထိုသို့သော ကြေငြာစာတမ်းကိုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးပဲတပ်ထားပါစေ မာဖီးယားဂိုဏ်းလို ဥပဒေမဲ့… မင်းမဲ့ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းနဲ့ ဘာမှမထူးတဲ့ဘ၀ကိုရောက်မှာပါ… အဲဒီတော့ ရဟန်းသင်္ဃာတော်များ ဂရုပြုသင့်တယ်… မိမိလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုက မိမိကိုယ်စားပြု ထားတဲ့ဘာသာကိုရော၊ မိမိပါဝင်နေသောအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာ…
ဘရာကြော်ပါ ကြောင်ဝတုတ် ..
မေတ္တာရပ်ခံ လို့သာ ရမယ် .. အမိန့် အာဏာထုတ်လို့ မရဘူးဆိုတာတောင် မသိကြတော့ဘူးလား ဆိုတာလည်းအံ့သြမိပါတယ် ။
မှန်ကန်ပါ၏ လိုက်နာရန်အသင့် ဖြစ်ပါ၏ ရွာပြင်ထုတ်ခံရမည်ကိုကြောက်မိပါ၏
သို့ကြောင့် အတိအကျ လိုက်နာပါမည်ဟု
ကျောက်ဖြူမြို့ ဘင်္ဂလီအများစု နေထိုင်ကြတဲ့ ပိုက်ဆိပ် ရွာကြီးတော့
ကြားသိရသလောက် မီးလောင်ပြာကျ သွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်
ဘင်္ဂလီအများစုတို့ရဲ့ လှေအစီး ၅၀ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် မျောနေရကြောင်း
သတင်းအဖြစ် တင်ပြလိုပါ၏ ။
ယခုသော် ကျောက်ဖြူမြို့ရှိ ဘင်္ဂလီ များ ကမန်များ မိမိ၏ အိုးအိမ်များကို
စွန့်ခွါ ထွက်ပြေး သွားပါသဖြင့် မြို့တွင် ရခိုင်များသာ ကျန်ရှိနေတော့ကြောင်းကိုလည်း
Saudi,Kuwait,UAE and other middle east islamic countries officially block other religious activitiesalot. And they creat the religious police in defending their religious.
ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကြားဖြစ်တဲ့ မုန်းတီးမှုကနေ တစ်ပြည်လုံးကို မပြန့်သွားစေချင်ပါ။
ပုန်းမကျီရှင်မ ဇာတ်လမ်းလို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အာဃာတထားပြီး ဘ၀ အဆက်ဆက် အပြန်အလှန် လက်စားချေနေကြလျှင် သံသရာ ဆုံးတော့မည်မဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်တိုင်လေးစားလိုက်နာခြင်းဖြင့်သာ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
သူတစ်ပါးဘာသာကို ထိပါးတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ ၀ါဒမဟုတ်ပါ။
မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က နံနက်ဆွမ်းခံအသွားတွင် တိတ္ထိတို့၏ ကျောင်းသို့ လှည့်ဝင်၍ တရားဆွေးနွေးမှုများပြုလေ့ရှိပါသည်။
ဘုရား၏၀ါဒမှာ မေတ္တာဝါဒ ဖြစ်ပါသည်။
9-11 ဖြစ်စဉ်က ရန်ကုန်တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ မေတ္တာပို့ပွဲကို အင်းလျားလိပ်ဟော်တယ်တွင်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်၍ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ အားလုံးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ် ဘက္ကရီ အီဒ်နေ့တွင် မြန်မာပြည်မှ မွတ်ဆလင်များ နွားသတ်၍ပူဇော်မှုမပြုဟု သတင်းကြားရပါသည်။
အမြော်အမြင်ရှိသော မွတ်ဆလင်ဘာသာခေါင်းဆောင်များ၏ အပြုသဘောလုပ်ရပ်ကို ချီးကျူးပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရား ပညတ်ထားခဲ့တာတော့ ငါဘုရားသာသနာကို ငါ့သားတော်တွေကပဲ ဖျက်လိမ့်မည်တဲ့။ နိစ္စ သုခ အတ္တ … သဂျီးရေ ဘုန်းကြီးကို အပြစ်မတင်နဲ့ ကိလေသာကို မြင်အောင်ရှု… :harr: